Ụdị ụgbọ elu: ihe ọ bụ, ihe ọ bụ na otu esi arụ ọrụ na gbanyụọ ya - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 30/05/2022 08:27 | Emelitere ka 31/05/2022 08:34 | Mmezi
Dịka iwu n'ozuzu, anyị na-echeta ọnọdụ ụgbọ elu mgbe anyị na-ebu ụgbọ elu n'ihi na anyị maara na, n'oge ụgbọ elu, anyị ga-akwụsị mobile ma ọ bụ tinye ya, dị ka ha na-agwa anyị n'elu usoro adreesị ọha, "ụgbọ elu mode".
Ma gịnị bụ kpọmkwem? Kedu ihe ọ bụ? Kedu ka ị ga-esi yikwasị ma wepụ? Enwere aghụghọ na ojiji ya? Ị jụọkwa onwe gị, anyị ga-aza ya niile.
1 kedu ihe bụ ụgbọ elu mode
2 Kedu ihe eji usoro ụgbọ elu?
2.1 ihi ụra nke ọma
2.2 Chekwaa batrị
2.3 Dee na WhatsApp na-ahụghị ya
2.4 Malitegharịa njikọ ahụ
3 Otu esi agbanyụ ma gbanyụọ ọnọdụ ụgbọ elu
3.1 Gbanyụọ ma gbanyụọ android
3.2 Gbanyụọ ma gbanyụọ iPhone
3.3 Gbanyụọ ma gbanyụọ na kọmputa
kedu ihe bụ ụgbọ elu mode
Ụdị ụgbọ elu bụ n'ezie ntọala ị nwere na ngwaọrụ mkpanaka gị, n'agbanyeghị na ọ dịkwa na mbadamba, laptọọpụ, kọmputa ... Ebumnuche nke a bụ ịkwụsị njikọ ikuku, bụrụ WiFi, data ekwentị, oku ma ọ bụ ozi ozi ma ọ bụ ọbụna Bluetooth.
Nke a pụtara na ekwentị enweghị ike iji ya, ebe ị gaghị enwe ike ịkpọ ma ọ bụ nata oku, ma ọ bụ SMS na ngwa agaghị arụ ọrụ. Naanị ndị na-adịghị eji ịntanetị nwere ike ịrụ ọrụ, mana nke fọdụrụ ga-akwụsịtụ ruo mgbe agbanyụrụ ọnọdụ a.
Ihe mere eji akpọ ya otú a bụ n'ihi na ọ na-ezo aka na mmachibido iwu nke dị afọ ole na ole gara aga nke mgbe ị na-eji ụgbọ elu eme njem, ị nweghị ike iji mkpanaka gị na ndị na-emepụta ihe, n'ebumnobi nke ịghara ịgbanyụ mobile , ha haziri ntọala a.
Ọ bụ ezie na taa a maara na ọ dịghị ihe na-eme n'ihi na ọ bụghị ịgbalite ya na ụgbọ elu, ha na-anọgide na-akwado ya, na ọbụna iwu. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na 2014 ọ nwere ike ife na-enweghị ịgbalite ya (nke EASA ma ọ bụ European Commission kwadoro). Buru n'uche na, n'agbanyeghị ohere a, ọ bụ ụgbọ elu nwere okwu ikpeazụ banyere ihe nwere ike ime na enweghị ike ime na ụgbọ elu.
Kedu ihe eji usoro ụgbọ elu?
N'ezie, ị na-ejiwo ọnọdụ ụgbọ elu n'oge ụfọdụ, ọ bụghị kpọmkwem ife efe. Ma ọ bụ na, n'agbanyeghị na isi ojiji ya bụ nke a, ọ na-enwekwa ihe ndị ọzọ kwa ụbọchị. Ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-ahụkarị bụ ndị a:
ihi ụra nke ọma
N'iburu n'uche na anyị na-ejikọkwu ọnụ na ngwaọrụ (mobile, tablet, kọmputa), ahụ anyị na-emeghachi omume na ụda ọ bụla nke sitere na ha, ruo n'ókè nke iteta n'etiti abalị nanị iji mara ihe bịarutere.
Nke ahụ na-ewutekwa ụra anyị.
Ọ bụ ya mere, iji ọnọdụ ụgbọ elu bụ ụzọ iji kwụsịtụ mkpanaka na-enweghị ịgbanyụ ya ma kwe ka ị nweta awa ole na ole nke ịdị jụụ na izu ike nke ahụ gị ga-ekele gị.
Ụzọ ọzọ a na-ejikarị ụgbọ elu eme ihe bụ ịchekwa batrị. Inwe ịntanetị, bluetooth, na ọtụtụ njikọ ndị ọzọ na-emeghe na-aga n'ihu mara na ọ ga-agbapụ batrị. Ọ bụrụ na ị nwere ntakịrị ihe fọdụrụ, ịgbalite ya nwere ike inyere gị aka idobe ya, n'agbanyeghị na ọ nwere nsogbu na nke ahụ bụ na ị ga-ahapụ ekwentị n'enweghị ohere nkwukọrịta..
Ihe na-adịchaghị radical ga-abụ iwepu data na WiFi ka ọ ghara ijikọ.
Dee na WhatsApp na-ahụghị ya
Nke a bụ ma eleghị anya, otu n'ime ọtụtụ ndị na-eji, na Ọ na-agụnye ịgbanye ọnọdụ ụgbọ elu ka ị nwee ike ịhụ steeti ma ọ bụ zaghachi ozi na-enweghị "sneak" pụtara. 'Ide' mgbe anyị na-aza.
Nke ahụ pụtara na ị nwere ike iwepụta oge ịzaghachi, ma ọ bụ wepụta oge na ngwa na-enwetaghị ozi.
Malitegharịa njikọ ahụ
Ọ bụ obere ihe amara ama, mana ọ dị irè mgbe njikọ ekwentị gị na-enye nsogbu (ịnweghị akara ngosi, ọ na-ebipụ, ị nweghị ike ịnụ nke ọma, wdg). Ọ bụrụ na nke ahụ emee, kaịgbanwuo ma gbanyụọ ọnọdụ ụgbọ elu n'ime nkeji ise nwere ike inye aka ịtọgharịa ma malitegharịa njikọ.
N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a na-enyere aka dozie nsogbu ahụ.
Otu esi agbanyụ ma gbanyụọ ọnọdụ ụgbọ elu
Ugbu a ịmara nke ọma maka ọnọdụ ụgbọ elu, oge eruola ka ị mata ka esi arụ ọrụ na gbanyụọ ya na ekwentị mkpanaaka gị, ma ọ bụrụ Android ma ọ bụ iPhone.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ dị mfe ebe ọ bụ na ọ na-adịkarị na njikwa ngwa ngwa nke ekwentị. Ma ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mgbe ị chọrọ ya mbụ ma ị maghị ebe ọ dị, anyị na-eme ka ọ dịrị gị mfe.
Gbanyụọ ma gbanyụọ android
Anyị na-amalite na gam akporo igwe. Nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ụzọ iji rụọ ọrụ ya (ma ya mere gbanyụọ ya) yabụ ị nwere nhọrọ:
Iji bọtịnụ gbanyụọ. Enwere ekwentị, mgbe ịpịrị ma jide bọtịnụ ọkụ, ọ na-enye gị obere menu tupu ịgbanyụọ kpamkpam, otu n'ime bọtịnụ ahụ bụ nke ụgbọ elu. Nke ahụ bụ ọnọdụ ụgbọ elu na site na ịpị ị nwere ike rụọ ọrụ ya (ma gbanyụọ ya otu ihe ahụ).
Na ntọala gam akporo. Ọ bụrụ na ị tinye bọtịnụ ntọala na ekwentị gị, ị nwere ike ịnwe igwe nchọta, iji chọọ ya ma ọ bụrụ na ọ pụtaghị. Mana ọ ga-apụtakarị: n'elu menu ma ọ bụ na WiFi na netwọkụ mkpanaka. Naanị ị ga-emerịrị ya ma ọ bụ ya.
na ngosi mmanya. Ọ bụrụ na i wetuo ogwe ngosi (ị na-ewere mkpịsị aka gị n'elu ruo na ala) na ebe ahụ, na njikwa nnweta ngwa ngwa, ị ga-enwe bọtịnụ akara ụgbọ elu iji rụọ ọrụ (ma ọ bụ gbanyụọ) ya.
Gbanyụọ ma gbanyụọ iPhone
Ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka gị bụ iPhone, ị kwesịrị ịma na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-ahụ ya n'otu oge ahụ na gam akporo, ya bụ:
N'ime ntọala ekwentị gị, ma na mmalite ma ọ bụ na-ele WiFi na njikọ.
Na akara center nke gị iPhone.
Gbanyụọ ma gbanyụọ na kọmputa
Tupu anyị ekwuo na e nwere ọtụtụ laptọọpụ na kọmputa nwere bọtịnụ ụgbọ elu. N'ihe banyere kọmpụta ụlọ elu, iji ya dị ụkọ, gafere ikekwe ịtọgharịa njikọ ndị ị nwere, mana na laptọọpụ enwere ike iji ya karịa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme njem ma soro ya rụọ ọrụ n'oge njem ahụ.
Ịgbalite na gbanyụọ ya ga-adabere ma ị na-eji Windows, Linux ma ọ bụ Mac na kọmputa gị, mana n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile, ị ga-ahụ ya ngwa ngwa site na ịchọ ya na isi ihe nchọta menu ma ọ bụ site na ịchọta akara ngosi nke nwere ụgbọ elu (otu ihe ahụ dị na mkpanaka gị).
N'ezie, cheta na ị ga-ewepụ ya ma emesịa, ma ọ bụghị, n'agbanyeghị otú ị na-agbalị iji jikọọ na netwọk ma emechaa, ọ gaghị ekwe ka ya.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ụgbọ elu mode, n'agbanyeghị na e mere ya maka ụgbọ elu, taa ọ nwere ọtụtụ ihe ọzọ ojiji. Naanị ị ga-enye ya ohere wee gbalịa. Ọ dịghị ihe na-eme obere oge na-enweghị mkpanaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Mmezi » Ụdị ụgbọ elu: ihe ọ bụ, ihe ọ bụ na otu esi eme ya na gbanyụọ ya